Kubaluleka kokunciphisa abalawuli kwi-Registry-Cadastre-Geofumadas
Kubaluleka kokunciphisa abahambeli kwi-Registry-Cadastre
NgoNovemba, 2018 cadastre, ezintsha
Kwintetho yam yakutshanje I-Seminar kwiNtuthuko kwiCadastre e-Multi-Land eLatin America, ebanjelwe eBototá, ndagxila ekugxininiseni ukubaluleka kokubeka ummi kwiziko leenzuzo zeenkqubo zanamhlanje. ikhankanya Made, inkqubo nendlela kwi ukuhlanganiswa yolawulo Cadastre - Ubhaliso, ephawula ukuba ngokutsha kweenkqubo umele ukunciphisa umsebenzi, amanyathelo, iimfuno okanye imisebenzi musa ukongeza Ixabiso lenqwanqwa, zona njengesiphumo umda siye saba kwaye abo bahluphekayo ngumsebenzisi wokugqibela.
Inkqubo yesimanje ibanzi kunenkqubo yokuzenzekelayo. Kubaluleke ngaphezu kokuyila inkqubo ye-cadastral okanye inkqubo, isicwangciso sokuphucula inkqubo kufuneka siphakanyiswe ngempumelelo kwiinkonzo kubemi kwisithuba esithile, iindleko, umgangatho, ukuphathwa kwedatha nokulandelelana.
Kwimeko yeli nqaku, ndifuna ukubhekisela kwinani labalamli abalawulwa yi-Registry, kwaye ukuba oku kuchaphazela njani izibonakaliso zokutsaliswa kwelotyalomali kwilizwe.
1 Ezinye izivumelwano = ezininzi iinkqubo = ezinye iimfuno = ixesha elide = ngaphezulu kweendleko.
Ukukhuthaza inkqubo yolawulo lwe-registry kufuneka iqwalasele ikhonkco yenkqubo epheleleyo, kungekhona inzuzo yendalo ngaphandle koommi. Ukusuka okubonakalayo yethu lweziko basoloko becinga ukuba kuhlaziywe entsha, entsha umnqamlezo-lokukhangela, kukho imfuneko entsha, njengokuba imiba ukuba bongeze ixabiso, yaye ucinga zokunciphisa ixesha ngokuyimfuneko ukucinga ngamaxesha jikelele nokuphucula iimeko ukuze abadlali bangaphandle kwesikhungo kodwa bangenelela kumsebenzisi, njengomcebisi, umqapheli, ibhanki okanye umasipala.
Umzekelo oxabisekileyo we-aspiration kwi-Integrated Cadastre Management Model - I-Registry yelizwe laseMzenteri yaseMelika endimenywe ukuba ndihambe nayo, ichaza ukuba, imingeni yalo iquka:
Ukungabikho kokufikelela kwiinkcukacha zobhaliso ngombutho ophawulezileyo ummi ukuba afumane isitifiketi sokubhalisa.
Usasazeko uphando kumaziko ezintathu ezahlukeneyo, le nyaniso emzimbeni, ngokoqobo irhafu kunye ubunyani kwezemali, nokuba iimpembelelo ngummi kufuneka aye kuyo nganye yezi ndawo ngokuthi solvency yentlawulo okanye kwimeko embi iimeko zokuhlola.
Ubunzima bobuqhetseba obusebenzayo babashenyi abaqinisekisiweyo, oku kuthetha ukungathandabuzeki komlinganiselo wabo kwaye baya kuhlola ngaphezu kwe-5o% yamatyala.
Ukungabikho kokufikelela ngokuthe ngqo kummi, ovumela ukufakela (intetho) ngaphandle kokuya eofisini ephathekayo ephela kwikomkhulu leSebe.
Injongo enhle yokunceda oomasipala ekuqokeleleni kwabo, kodwa oku kufuna ukufumana isisombululo serhafu ukuze bakwazi ukubhalisa. Ngobunzima obu lukhokelela, kuba phakathi kwexesha iinkqubo ezifunekayo zinokutshatyalaliswa ukuqinisekiswa kweso solvency.
Oku kwenza i ummi weli kufuneka uye: kwiRejistri eNkulu Land, ukuba uligqwetha, umcandi, i Fiscal Cadastre, i-Municipal Cadastre, ngokwasemzimbeni Cadastre kunye bagcina nazo zonke iimfuno Land Registry. Le intsebenziswano ubuncinane kabini, ukuba banikwa iimfuno lilinge lokuqala, olungathanga sokucoca ezinye data elwayo, nto leyo ayifuni ubungqina umda kunye nendawo ecacileyo, kunye iiseshoni eziliqela ubuncinane nge izivumelwano ukuba ngandlela-thile izuzwa ngolu bunzima.
Inkqubo yesimanje kufuneka ibandakanye ukuphuculwa komzekelo wokulawula ummi. Ukuba akunjalo, yinto nje yokuzenzekelayo.
Kweli lizwe, kungekudala wenza wokungena disminuyeran 30 yobhaliso ixesha 22 iintsuku, Cadastre imozulu 10 iintsuku imvume iflethi + iintsuku 15 isiqinisekiso + 25 ukuba kukho kuhlolwa yaye ukuba kukho ezintathu ze-cadastres phakathi; wanda. Ngoko ke, ukuba eli lizwe ukuba sithetha yimpumelelo (kuba ukuba nimane ingqeqesho baya ukufikelela) kwixesha elifutshane ukuqonda njengeminqweno lula umxokelelwane, nenani inkqubo ekhethekileyo, njengoko siya uyavuma, Ndiqinisekile ukuba kuya kufuneka uhambe kwaye ungayikukubona kuphela ukuzonwabisa kwintetho ye-güirilas kunye ne-gallo pinto enokuzithengisa.
Ndimisela omnye umzekelo, kwimeko yaseMzantsi Melika, apho ndikhangele khona inkqubo yeenkqubo, apho kukho enye inguqu yeCadastre, kodwa apho i-curator yasezidolophini kunye neSebe loCwangciso lingenelela. Ukongezwa kule ngxaki, i-Catastro iphelile kwinqanawa, nangona emva kokuba ibhalise utshintsho oluquka ukuguqulwa komfanekiso, kwaye kwiimeko ezininzi azizi ukuba i-alert isingayifumana kwi-curator, yesakhiwo esitsha. Oku kwenza ukuba ummi aphumelele: IRejistri yomhlaba yenkululeko yokubambisa, ingqapheli, umcebisi-mhlaba, umgcini, uMasipala, uMbhalisi womhlaba wokubhalisa kunye neCadastre; ngomngcipheko wokuba omnye unyaka emva kokuba bathengise, bawubiza ngokuba yiCastastro, okufuneka bayifumane kwimaphu yomveleli, kuba ulwazi aluhambelani nolwazi lwesiseko se-cadastral.
Ummi ubaluleke ngaphezu kwenkqubo.
Uninzi lwezi nyathelo kunye nolawulo lubonakala luhle ukusuka kwicala leziko. Kodwa ukusuka kwicala lommi, lixesha, iindleko, ukuphindaphindwa kweemfuno, ukungahambisani kolwazi, ekugqibeleni zibonakaliso eziphantsi zokuncintisana kwelizwe.
Nangona kunjalo, ubunako beli lizwe elikhuselekileyo lamabhanana lifuna ukuba ngumzekelo ofanelekileyo wokuza kubona. Hayi, ngokuba nanko i-paisa tray okanye i-patacón gratinado yimboniso engabonakali ololuhlu lwegama elibi eliqaliswe ngu-Netflix.
2 Abaqhubi abancinci = inkuthazo enkulu yeemakethe zepropati = ukwanda kwenkcubeko yobhaliso.
Ukunciphisa ababhalisi kwiRegistry yecontact transaction - i-Cadastre ayinakwenziwa ngokwembono yamaziko, ngokwahlukeneyo. Lo ayingomsebenzi weengcali ze-cadastral, hayi kwanerejistra, kuba uninzi lwazo luya kubambelela kwisiko, kwinkqubo okanye nakumthetho. Ungaze uye kwiikhompyuter ezonwabileyo ukusebenzisa amagama anje nge #AI #4IR #IoT #BigData #DeepLearning #DigitalTwin. Olu tshintsho (kucacile ukuba ndithetha nje ngabakhwetha) banembono zobunjineli bemizi-mveliso kunye nentando yezopolitiko yezigqibo zophuhliso lwesizwe; nemvakalelo yokuba ngummi onengxaki yokufumana uburhulumente, kunye nengqondo eqhelekileyo yezenzo ezilungileyo eziye zasebenza kokubini kwimeko yaseMelika nakumazwe asele ehlule loo mvakalelo yokuba ubunzima ngakumbi "bupholile", ngaphandle kokugweba iqela elincinci yabantu abasoloko behlala kumaziko, abaye bakhulisa ukuqonda okuqhelekileyo kwaye balinde kuphela ithuba lokusebenzisa izimvo ezilula ezingekabi nayo i-echo -nangona oko kufuneka kufike iincwekhwe ukuze kuqinisekiswe oko kwakucatshangelwe-.
Kufana negama elidumileyo lomnye wabacebisi bam ngaphesheya kwechibi: Iiprojekthi ezinkulu azidingi iinjineli, kodwa abafana beshishini.
Yonke into igxininise kummi, efuna oko kwongeza ixabiso. Ngaphambi kokuba, ukuthenga umzuzu wokutshiza ngomnxeba weselula okanye ukuhlawula ibhilikhi kwakuyi-protocol kwi-arhente; Namhlanje kuthengwa kwibhokisi yevenkile okanye kwi-intanethi. Kungenxa yokuba akusiyo ishishini ukuhlawula, kodwa ukuzinikezela kwinkonzo yezinto ezintsha zokunxibelelana. Ngaphambi kokuba nganye ifowuni inezibonda zayo, iimbambo, amaziko eenkcukacha, ngoku ziyakhupha izinto ngenxa yokuba ishishini labo lingabinjineli yobunjineli, kungekhona nekhompyutheni yesayensi.
Izinto ezininzi ezenziwa ngamaziko aseburhulumente zinokuphuma ngaphandle, kuba azongezi xabiso, okanye kuba umntu enze ngcono. Umzekelo ukugcwalisa (ukwamkela), okunokwenziwa ngumntu osebenza kuye kufutshane nommi ekufuneka ehambile, njengomphononongi, umvumisi, umasipala, ibhanki, okanye onokuthi abanjwe ngummi omnye. Umsebenzi wokwabela amagunya ongekho nzuzo kuRhulumente unokukunceda unike ingqwalaselo yokulawula abaqhubi kunye nokwenza umsebenzi wexabiso elikhulu kubemi abanjengoqinisekiso kunye nobhaliso. Ukufakwa ekhaya kweenqobo zokugweba kunye nokwenza lula iitemplethi kungakhokelela ekuphunyezweni kweenjini ezizenzekelayo ezingenamntu, ukwenzela ukuba umngcipheko wempazamo uncitshiswe kuye nabani na owenza ifayile le nkqubo, iye kwi-funnel yesiqinisekiso; phantse njengoko isenza ngoku isatifikethi sobhaliso sokuba i-40 kwiminyaka eyadlulayo sasikholelwa ukuba "ingangqinwa kwaye ibhaliwe kwivesi" kodwa ngoku asiboni ukuba sisiphumo esikhutshwe yinkqubo kwifom ye-tabular.
Kwaye sibone ukuba asinakuthetha ngezivumelwano eziphambili okanye ukuvula ii-notaries. Sithetha malunga nabahlalutyi bokunciphisa.
Imisebenzi eninzi ingenziwa ngamanyathelo ambalwa, ukuba ucinga ngomhlali. Umzekelo, iintlawulo ezininzi, ekugqibeleni ekugqibeleni ziya kwiimeko ezifanayo kunye nezobuchwepheshe zinokwahlukana nokuba zihlawuliswa kwinqanaba elinye.
Urhulumente akanayo imali; Unayo imali. Umoya ukhona ukunika inkonzo engcono kummi, kungekhona ukulawula ukuthanda phakathi kwamalungu ezenzo ezisemthethweni. Abenzi bokugqiba kufuneka bajolise kwiinzame zentlalo karhulumente.
Ummi ufunda ngakumbi iteksi endleleni esuka kwikomkhulu leCastastro ukuya kwi-ofisi yeRejistri, kunokuba isiluleko se-ISO gurus.
Kulungile ukuba ngoku ndenza umgca owodwa, ukwenza isicatshulwa, ukuhlawula ngam ikhadi lam kunye nokunikezwa, esikhundleni seendlela ezintathu ebeziqhele ukuzenza phakathi komdlali, i-bhanki kunye ne-receiver. Ngoku andiyikuhlawula i-feeder ngoba ndiyazi ukuba ixesha liza kuguqula.
Ndineenqatshwa ezintathu kule nkqubo. Njalo ixesha umhlalutyi ohlukileyo uyangifaneleka.
Andinomdla kumqondiso weMlawuli weCadastre, ngesitampu esithi sakhishwe liziko kunye nendlela yokujonga ukuba ithembekile.
Andiyiqondi loo uluhlu lweemfuno abapapashileyo. Ndihlala ndihlawula umanothi ukuba ndichaze kum kwaye umphathi ukuze ahlaziye.
Andiyazi ukuba ndingayifumana njani le mfuno xa beyiphakamisa kwifestile bayiphonsa kwinqwelo.
3 Zingaphi amanyathelo anokulawulwa kolawulo lokubhalisa?
Ukuqinisekisa ukuba kunokwenzeka ukwenza lula, ngaphandle kokuphulukana nolawulo ndiya kusebenzisa izalathi «ukwenza ishishini»Ukuya ku-Okthobha we-2018, yenani lamanyathelo abandakanyekayo ekwenzeni inkqubo yobhaliso, kwaye ndiya kugxila kumazwe aseMelika naseYurophu njengamanqaku othelekiso. Bona ukuba indlela esetyenziswe ngokwenza ushishino iyibiza ngokuba "ziinkqubo," kuba ndinokuba nabameli babini kuphela njengabadlali, kodwa ukuba kuya kufuneka ndigqithe kubo kathathu, ngokuqinisekileyo kuya kubakho iinkqubo ezintandathu; kuba andidibani nezizathu ezifanayo. Kwaye ngelixa ezinye zezi zikhombisi zithathwe kwiinkonzo ezithile kunye neenkonzo zentengiso ukuya kwiidolophu ezinkulu, sisiqalo esilinganayo sokucinga apho sifuna khona okanye apho singaya khona.
Amazwe anama-bureaucracy ngaphezulu ngokwemigaqo yabaphathi be-registry:
Izwe Uhlu AbaPhakathi
Nikharaguwa 155 9
Jameyikha 131 8
Ekhuwado 75 8
Mekhsikho 103 8
Bholiviya 148 7
Guatemale 86 7
IPanama 81 7
Kholambiya 59 7
Itheyibhile engenhla ibonisa amazwe anabamkeli abaninzi, ukusuka kwi-7 ukuya kwi-14. I-Brazili inokugqithiseleyo, kunye ne-14.
Ukuphuma eBrazil, phakathi kweemeko ezimbi kunazo zonke zenkxalabo yokuba ummi kwinkqubo yezo njongo yi-Uruguay, Venezuela naseNicaragua kunye namanqanaba e-9.
UMexico unabameli be-8.
IColombia, iPanama, iGuatemala, iArgentina kunye neBolivia ine-intermediaries ye-7.
Ikholamu yokuqala yindlela yokubhalisa ngokufanelekileyo, ngaphandle kwabathengi, ibona imiba esemgangathweni yolawulo lomhlaba, amaxesha kunye nolwalamano lweendleko ngokubhekiselele kwintengo yento ekuthengiseni. Olu hlobo, oluphantsi, lungcono; ukuze igalelo elihle kakhulu kweli qela libe yi-Ecuador yokuba ngaba-intermediaries be-8 banesimo se-75, kunye ne-Colombia kunye nesimo se-59 kunye nabaxhasi be-7. Nangona kunjalo, bahlala benemiba eninzi, ngaphezu kwe-50; I-Bolivia kunye neNicaragua zihlala zide kakhulu kumsebenzi okhangelekayo kumhlali.
Amazwe anomgangatho ophakathi ophakathi.
Republic Dominican 77 6
El Salvado 73 6
icosta Rica 47 5
EPeru 45 5
Itheyibhile ngasentla ibonisa amazwe aphakathi kwa-5 ukuya kwi-6.
Bona apha lonke iLatin America.
Apha kwakhona owayo Spain ukho njengabalamli 6 kwaye ubone ngokucacileyo ukuba ngaphaya nokunciphisa iinkqubo naye ephembelela iindleko imbonakalo, ixesha kunye nokubasemgangathweni kwengcaciso cadastral, njengoko kwimeko Canada kunye nokubeka ngezantsi 40, kunye Peru kunye ICosta Rica ibe phantsi kwe-50. EHaiti kwakhona kuphela xa njengabalamli kuphela 5 181 has a simo.
Akungabazeki ukuba uphuhliso lwentlalo luhlobo oluthile, ngokukodwa ngenxa yezinto zomntu ngenxa yokuba zichaphazelwa ngabaxhasi bezopolitiko, ukungabikho kwemisebenzi yoluntu kunye nokugxininisa ekuphuculeni izikhombisi zokusebenza. Masingathethi ngenxa yesithuba kwiinkcubeko ezincinane zobhaliso.
Amazwe anezixhobo eziphambili kwi-registry chain.
EUnited States 38 4
ESwitzerland 16 4
EFinland 28 3
EDenmark 11 3
Photshugo 36 1
ENorway 13 1
Le yimbi enye. Yabona, njengoko amazwe anamaqela ambalwa angaphantsi kwe-40 kwizinga lokukhuphisana ekusebenziseni ubhaliso. Ubuncinane i-4 ifaka ithuba lokuba wenze onke amanyathelo phambi kolawulo olulodwa lokubhalisa; Kusetyenziso lokuzimela phambi kokubhalisa okuthembekileyo.
I-Denmark neFinland bane-intermediaries ye-3, kunye ne-rankings ye-11 kunye ne-28 ngokulandelanayo.
I-Russia, iSwitzerland, iItali kunye ne-United States bane-intermediaries ye-4. Ngendlela, i-United States yiyona kuphela ilizwe laseMerika kweli qela.
Ndivala le nqaku ngolu hlobo, ukukhumbula ukuba iimbono zam azibazisi ukuba zizalwe, njengoko ngamanye amaxesha intombi yam ingenza ndive.
Umzuzu wesiqingatha kwi-11: 30 ngemini, emagqabini aseCordillera de Montecillos, elambileyo kunye ne-backpack ye-backpack egawula i-jets of sweat emveni kwam, ndazama ukuchazela kumnini inani lexabiso elitsha Sasenza. Emva kokuyeka ukusebenzisa amagama e-UTM, ukulungiswa okuhlukileyo, i-constellation ye-satellite, i-WGS84, ifomathi yegedijithi kunye namanye amagama endicinga ukuba uya kuqinisekisa umnini wefama, ndathi:
Ixabiso elibaluleke kakhulu kulo mlinganiselo omtsha kukuba ummelwane wakho akakwazi ukufakwa kumda wepropati yakho.
Wathabatha umkhonto owawufika esinqeni sakhe wathi:
Jonga unjineli, esi siqinisekiso esiyimfuneko kum.
Emva koko wandibiza ukuba ndidle ii-tortillas ezinamaqanda kunye neembotyi, kwaye ndincoma indlela yokunyuka ukuya kwifama elandelayo.
Ingundoqo yento eyongeza intengo, asiyazi into esiyiyo kwindlela yoyilo lwenkqubo. Ummi uyazi kwaye asimele siyeke ukumbuza.
Ingundoqo yomqeshwa karhulumente ukufaka isandla ekuphuhliseni ilizwe, okwenza ubomi kube lula kummi.
Post edlulileyo«Edlulileyo Abaphumeleleyo bamabhaso e-annual for Innovation kwiZibonelelo
Post Next I-Transoft Solutions kunye ne-Plexscape yenza intsebenziswano ukuba inikezele ngokubonakalayo kwezithuthi ze-3D kwiGoogle EarthOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "Ukubaluleka kokunciphisa abahambeli kwi-Registry-Cadastre"
Uyabulisa uBernard. Ndicinga ukuba izigqibo ezizezona zinomdla kwi-CNR kukuba ugxile kububanzi kunye nokudityaniswa kweRegistry-Cadastre, endaweni yokulangazelela i- "multifinalitarian" ezinokubakho ngenxa yeenkqubo ezilula kunye nokudibanisa abadlali. Ukugona
bernard samoullier uthi:
Iphepha elincomekayo elixhunywe kwi-Geofumadas yeSithili kwiNtlanganiso yeCadastre yaseMalitarian yaseLatin America, ebanjelwe eBototá, igxininisa ukubaluleka kokunciphisa abalawuli kwi-Registry - Cadastre management.
Kuyinyaniso ukuba ukunciphisa abaphambili kwi-Registry - Ulawulo lweCadastre lubalulekile ukuze kuzuze ummi kwaye ngenxa yoko, eli lizwe.
Phakathi izibonelelo esele zikhankanywe kwiphepha ekhankanywe uyakwazi kugxininisa ukuncitshiswa iziphene, iindleko kunye norhwaphilizo, kwakunye nokwandisa ukufana kwi ubuncwane isizwe amazinga ukwandisa inxulumene imicimbi izinga lwezoqoqosho.
Kucacile ukuba isihloko siquka iinkalo ezibini ezongezelelweyo:
I-1) Ukwenza lula kubandakanya ukupheliswa kwamanyathelo okungenamsebenzi kulawulo naphakathi kolawulo olwahlukeneyo oluchaphazelekayo kulawulo lweRejista yeCadastre. Ndibe nethuba lokuhlalutya imeko yamva nje yokuqinisekiswa kobhaliso lomhlaba, ngemaphu yeenkqubo ibonakalisiwe ukuba inani lamanqanaba ukusuka kwi-45 ukuya kwi-10 lingancitshiswa. Ukubhaliswa kwepropathi nganye, ukulungiswa okunokubakho nako kwakubalulekile, kuphelisa ukujikeleza kunye nokuhamba, ukulawula uluhlu lwamanqanaba obuchwephesha kunye nawomthetho ngeenkqubo ezizenzekelayo, kusetyenziswa iikhowudi zebhari okanye okungcono, itekhnoloji ye-blockchain entsha enomda obanzi. Ukhuseleko
I-2) IRegistry - Ukudityaniswa kweCadastre kubalulekile ukuqinisekisa ukuba umzuzi uqinisekile ngokwasemthethweni ngaphezulu kwepropathi echaziweyo yendawo (omnye umba kukuchaneka okufanelekileyo kophando). Ikhonkco lokuBhaliswa kweCadastre linokufumana izidanga ezininzi zokudityaniswa ngaphakathi kwiZiko loBhaliso leLizwe kwi-El Salvador okanye phakathi kwamaziko ohlukeneyo. Into ebalulekileyo kukuqinisekisa, ukuhambisa ngokuzenzekelayo kunye nokugcina ikhonkco elingavulelekanga phakathi kwelungelo kunye nepropathi ukuvumela ukuthengiselana okudala ngaphandle kwesiphene.
Nangona kunjalo, ukhuphiswano ngqo lokubhaliswa kukhuphiswano kwinani leenkqubo ezisekwe kuphando lweshishini lubonakala luyinkimbinkimbi kuba iimeko neenkqubo zinokwahluka kakhulu phakathi kwamazwe okanye phakathi kwemimandla yelizwe (ukongeza uninzi lwamazwe akhankanyiweyo kwilizwe Ukwenza uphononongo lweshishini alunayo inkqubo ye-cadastre -izaliswe ngokupheleleyo kunye / okanye ubhaliso olungahambelaniyo). Kuya kulungelwa ukuba kukhuliswe nzulu okanye kubhalwe phantsi olu phando kwaye, ukuba kunokwenzeka, ngenqaku lokujonga izinto ezahlukeneyo. Kuya kufuneka sizibone ukuba zeziphi izibonisi ezisetyenzisiweyo kunye nobunzima phakathi kwazo. Amanqanaba amabango, imiceli mngeni, isenzo sobulungisa esihambelana nenqanaba lokushintshiselana kunye nokufikelela kubambiso lwetyala lokuthengisa izindlu, umzekelo, izinto ezibalulekileyo.
Kungakhathaliseki ukuba ziphi izigqibo kunye neemfuno, umntu akafanele alahlekelwe yinto yokuba isigqibo sezopolitiko sinqumle ukwenzela ukunciphisa abaphakathi kuba baya kudla ukujamelana nokunyanzela ukutshintshwa kwimiqathango emiselweyo.